MUUSIKADA IYO HEESAHA OO LOO EEGAYO SHARIICADA by Qasim Hersi Farah (Paperback) - Lulu
MUUSIKADA IYO HEESAHA OO LOO EEGAYO SHARIICADA
By Qasim Hersi Farah
Ilaahay diinta Islaamka uma soo dejin in ay wax kasta xaaraantimayso sida ay dad badan oo mara ku dheg ihi maskaxda gashadeen. Balse waa ka soo horjeedka taas oo waxyaalihii horay u xaaraanta ahaa ayey qaarkood (ama intooda badanba) xalaalaynaysaa. Waa diin naxariiseed oo xaaraantimaysay waxyaalo tirsan oo la wada ogaan karo. Weliba waxa ay si sahlan dadku ku ogaan karaan waxyeelada ay inoo leeyiihiin dad ahaan, hadday tahay xag naf ahaaneed, xag dhaqaale ahaan iyo hadday tahay xag akhlaaq midoodba. Haddaan si kale u qormayno, wax walba waa fiican iyo udug qurxoon wixii xumaan ahaan looga soo dhex saaray mooyee. La socodka arintaa ayaa hadana ina tusi karta in wax waliba dhan wanaagsan oo kheyr ah iyo dhan foolxun oo shar ah labadaba yeelan karaan. Xataa haddii uu rumaystaha wanaagsani si xad gudub ah usameeyo cibaadada Ilaahay faray waxay ku noqonaysaa qalad hor leh oo uu galayo.
FlowersBooks, an imprint of Flowers School of Technology of Management